इटहरी टु मनाली
२०९८ पटक पढिएको
जतिजति पर्यटकको घुइँचो भेटिन्थ्यो त्यति नै आफ्नो देशमा त्यसै खेर गइरहेको प्राकृतिक सम्पदाले मनै छुकछुक बनाउँथ्यो ।
साँझको घामले पनि शायद हामीलाई शुभयात्रा भन्दै थियो होला । मौसमले पनि बिदाइमा साथ दिएर होला ओभानो थियो बाटो । अवरोध थिएन कुनै झरी बादलको न त आवेग नै थियो आँधी हुरीको । असोज वा अक्टोवरको मौसम यसै मनोरम हुन्छ नै त्यसैले त भनाइ नै छ दशैं आएजस्तो घमाइलो मौसम ।
घरका तमाम चिन्ताहरू केही समयको लागि घरमै छोडेर अक्टोबर ९ तारिक अर्थात् असोज २२ गते बेलुका ९ जना साँझको ५ बजे इटहरीको बर्गर हाउसअगाडि भेला भएर जोगबनीको प्रस्थान ग¥यौँ । ठाउँठाउँमा ल्याम्पपोस्टको उज्यालोले भुइँ पोतिसकेको थियो । साढे सात बजे जोगबनी ट्रेन स्टेसनमा पुग्यौं । सिमाञ्चल टु आनन्दविहार रेल हाम्रै पर्खाइमा बसिरहेको झैँ देखिन्थ्यो ।
९ जनाको हाम्रो समूह रिजर्भेसन सिटहरू भने तीनतिर परेको रहेछ । हाम्रो मात्र होइन अरु गु्रपको पनि सिट त्यस्तै परेको रहेछ, तिनतिर छरिएको । तर सिमाञ्चल रेल भने नेपाली यात्रुले नै पूरै रिजर्भ गरेझैँ जताततै नेपाली यात्रु मात्र देखिन्थे । त्यसमा केही इटहरीकै र परिचित अनुहार पनि थिए । नेपाली यात्रुहरूको भीड हुनुको विशेष कारण भने मानवधर्मका गुरुका कान्छा छोराको शुभविवाहमा सरिक हुन हरिद्वार जाने भक्तजनहरू थिए भने कोही बृन्दावन लगायत विभिन्न तीर्थस्थल जाने तीर्थालुहरू थिए ।
हाम्रो यात्राको गाइड भनौँ या अभिभावक रोशन चौधरी दाइ हुनुहुन्थ्यो । धेरै पटक ट्रेन ट्राभल्स गरिसकेका दाइले चलाखीपूर्वक कति सजिलै हाम्रो सिट एकै ठाउँ मिलाइसक्नुभएछ हामी छक्क प¥र्याैँ । हामी मात्र होइन सिट सट्टापट्टा गर्ने अरु नेपालीहरू पनि अचम्म मान्दै हाम्रो पनि सिट मिलाइदिनू न दाइ भन्दै आए । केहीछिनको लागि दाइ रेलको टिटि नै बनिनुभयो । हामी बीचबाटै कसैले मेरो पनि सिट मिलाइदिनू न टिटि दाइ भने । एकछिन हाँसोले गुञ्जायमान भयो क्याबिन ।
छकछक गर्दै आफ्नो गति पक्डेर रेलले जोगबनी स्टेसन छोड्यो । रेलको लिक छेउछेउका घरहरू, रुखपातहरू, बिजुलीका पोलहरू सबै कुद्न थाले । कुदिरहेको ट्रेनमै हामीले घरबाट ल्याएको खाजा भाग लगाएर खायौं र आआफ्नो सिटमा सुत्यौं । बिहान भने सबैले ट्रेनकै खाना अर्डर गरेर खायौं । कोही मोबाइल चलाउन थाले कोही गफ गर्न थाले म चाहिँ कथासङ्ग्रहमा हराउन पुगेँ ।
जब रेल मिर्जापुर पुग्यो क्याबिनमा पानीको हाहाकार मच्चियो । तीन÷चार ओटा बोतलको पिँधको पानी निथारेर एक घुट्की जम्मा पारी प्यास मेट्नुभयो रोशन दाइले । त्यतिञ्जेल ट्रेनमा पानी बेच्ने पनि एउटै आएन ।
बेलुका ट्रेन चढ्ने बेलामा समूहका सबैलाई एउटै क्याबिनमा सिट मिल्ला नमिल्ला भन्ने चिन्ता र आआफ्नो लगेज सम्हाल्ने धुनमा यथेष्ट पानी किन्ने होसै भएन । १० अक्टोबर रातको साढे १० बजे यात्रुहरूलाई आनन्दविहार पु¥याएर रेलले पनि विश्राम लियो ।
रातको १२ बजे पहारगञ्जको होटल ओराइजिङअघि पुगेर ट्याक्सी रोकियो । सामानहरू झारेर नुहाइधुवाइ गरी १ बजे खाना खाएर २ बजे राती बल्ल ओछ्यानमा त पुगियो तर बाकसजस्तो कतैबाट हावा नछिर्ने कोठामा सुत्दा कतै अक्सिजन नपुगेर निस्सासिएर मरिने पो हो कि भन्ने चिन्ताले खासै निद्रा परेन । बिहान उठ्दा टाउको चटचट गरी दुखिरहेको थियो । मेरो मात्र होइन विमला भाउजू र देवीजीले पनि उसैगरी टाउको दुखिरहेको बताउनुभयो । टाउको दुखेर थला पर्नुभन्दा ग्यास्ट्रिकको औषधी खाएर पेन क्लियर खानु नै मनासिब लाग्यो र सबैले एक÷ एक गोली पेन्टापाराजोल खाएपछि एउटा÷एउटा एसिटोमिनाफेन खायौं र केही बेरपछि छ्याङ्ग महसुस ग¥यौँ ।
त्यसपछि नयाँदिल्लीका गगनचुम्बी घरहरूको काँधकाँधबाट छिरेको बिहानी घामको केस्राकेस्रा छिचोल्दै पहारगञ्जको गल्लीतिर मोबाइल रिचार्ज दोकान खोज्न निस्क्यौं । तर एक दुईवटा मिठाई र चिया पसलबाहेक सबै पसलहरू बन्द थिए । त्यहाँ प्राय १० बजेपछि मात्रै दोकानहरू खुल्ने रहेछ । बजारका चोक गल्लीगल्लीमा फोहोरको मेला भने प्रशस्तै थियो । मलाई हाम्रो नेपालमा व्यवस्थापन हुन नसकेको बढ्दो फोहोरमैला र प्रदूषणले बारम्बार मन पोल्ने गर्छ । म मात्र होइन स्वच्छता चाहने हरेक नागरिकको मन पोल्छ र अनेक अभियानहरू चलाएर गाउँशहर सफा र सुन्दर राख्न भरमग्दुर कोशिस गर्छ । तर एक्लैको केही सीप लाग्दैन र अभियान थला पर्छ अनि अभियन्ता अलपत्र पर्छ ।
त्यसमा अझ आफ्नै शहर इटहरीको बढी चिन्ता लाग्ने गर्छ । इटहरीको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि आजभन्दा ७ वर्ष अगाडी सन्दीप पौडेल, दिव्यराज गुरुङ, निर्मला चौधरी, मन्दिरा भट्टराई, निरञ्जन खड्का र मलगायतका अन्य सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले ‘क्लिप इटहरी क्लीन’ नामक अभियानको थालनी गरी केही सातामै इटहरीको सयौं टन फोहोर सफा गरेका थियाँँै ।
महिनौँसम्म यो अभियानमा लागिरहँदा २०७१÷७२ सालतिर इटहरी बजारलाई पू्र्वकै सफा शहरको रूपमा स्थापित गराइयो । तर यो अभियानले नगरपालिका र शहरवासीको पूर्ण साथ र सहयोग प्राप्त नभएको हुनाले सोचेजति सफल हुन सकेनौँ । तर अझै हामी हाम्रो शहर सफा, स्वच्छ र हरियाली बनाउने प्रयासमा छौँ । संवाद समूह सुनसरीले सरकार र शहरवासीलाई घच्घच्याउँदै छ अहिले । थाहा छैन कहिले ब्युँझने हो समग्र इटहरी स्वच्छता शान लिएर ?
दिल्लीको अस्तव्यस्त फोहोर देखेर मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । यहाँ पनि त हुँदो हो पर्यावरणप्रति चिन्ता र चासो राख्नेहरू ? शायद उनीहरू पनि हामीले जस्तै सम्बन्धित निकाय र शहरवासीहरूको साथ सहयोग र सपोर्ट नपाएर अलपत्र परेका होलान् र प्रदूषित भएको होला शहर ।
केही भीआईपी एरिया, पर्यटकीय स्थल, धार्मिक स्थलबाहेक रेलमार्ग छेउछाउको झोपडपट्टीहरूमा देखिने फोहोरको डङ्गुर दिल्लीको विभिन्न ठाउँमा देखिने छरपस्ट फोहोर, नालीको दुर्गन्ध देख्दा लाग्यो फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण सचेतनामा चाहिँ भारत असफल नै रहेछ । दक्षिण भारतमा केही कम फोहोर देखिन्छ । वास्तवमा पर्यावरणदेखि मानसिक र शारीरिक स्वच्छता हरेक मानवको लागि आजको आवश्यकता हो ।
पहारगञ्जका मैला गल्लीहरू निकै परसम्म छिचोल्दा पनि मोबाइल रिचार्ज गर्ने पसल भेटिएन । घरबाट निस्किएको २ दिन भइसक्दा पनि यहाँ पुगियो भनेर घरमा जानकारी दिन पाइएला भन्ने हाम्रो अभिलाषा तत्काललाई ओइलायो । बिहान १० बजेदेखि बल्ल पसलहरू खोलिन थाले । ११ बजे बल्ल भारतीय सिम हुने जतिले मोबाइल रिचार्ज गर्न पाइयो । हाम्रो टोलीसँगै यात्रामा निस्कन काठमाडौंबाट आउने समूह पहारगञ्जकै होटल ओममा बसेको थियो । बिहानको करीब साढे ११ बजेतिर सबै जम्मा भएर चियापान गरी केही समयको लागि मनालीको सौन्दर्यमा हराउन दिल्ली छोडियो ।
११ अक्टोबरको लञ्च करीब दिउँसो ३ बजेतिर मुर्दाल हरियाणास्थित विशाल, सफा र व्यवस्थित शिव ढावामा गरियो । लञ्चको लागि सो ढावामा करीब डेढ सय ट्याक्सीहरू पार्किङ गरिएको थियो । हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा विशाल, व्यवस्थित, सफा र आधुनिक थियो त्यहाँको ट्वाइलेट पनि । अन्य सुविधाको त कुरै नगरौं ।
भारतका विभिन्न राजमार्गहरूमा खोलिएका मिनी मार्केटसहितका यस्ता अत्याधुनिक ढावाहरूको व्यवस्थापन वास्तवमै तारिफयोग्य रहेछन् । बेलुकाको सुनौलो घामका धर्साहरूको स्पर्शले हरियाणाको खेतको फसलहरू सुनको बिछ्यौना झैँ मोहक देखिन्थ्यो भने त्यहाँको सडकबाट देखिने हरियालीले पनि यात्रुहरूलाई मोहित बनाउँदो रहेछ । उसो त हरियाणालाई भारतको बिन्दास र विकासमा तीव्र गति भएको राज्यमा मानिँदो रहेछ भने हरियाणाको आफ्नै सांस्कृतिक, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व रहेछ ।
पौराणिक कालमा महाभारत युद्ध भएको कुरुक्षेत्र हरियाणामै पर्दछ भने सांस्कृतिक वैभवता र अनेकाँै प्राकृतिक सुन्दर नजाराहरूले पनि हरियाणालाई विशेष बनाएको रहेछ । तर हाम्रो यात्राको प्याकेजमा नपरेकाले हरियाणा यात्राको आनन्द अर्काे पल्टलाई साँच्दै यसपाली यी तमाम हरियाणी खुबसुरतीहरूलाई मनमनै बाइबाइ भन्दै हाम्रो सवारी अघि बढ्यो । मनालीको सौन्दर्य पान गर्ने हतारमा हामीलाई रातबिरातले रोकेन । अनिँदो र अप्ठ्यारोले छेकेन गाडी कुदिरह्यो कुदिरह्यो । ड्राइभर रामुले चलाएको गाडीको पाङ्ग्राभन्दा छिटो हाम्रो मन कुद्थ्यो ।
रातभरको यात्रापछि बिहान करीब साढे ६ बजे न्यु मनालीको हिल भ्यु लजनेर पुगेर गाडी रोकियो । एउटै साहुजीका ५÷७ ओटा लज रहेछन् न्यु मनालीमा मात्रै । किचेन, सिटिङ रुम, डाइनिङ हलसहितको बङ्गला टाइपको ३ बेडरुम भएको दुइ फ्ल्याटलाई रातको ४ हजार भारु प¥यो । सुविधा र सजावटको हिसावले सिमला र दिल्लीको तुलनामा सित्तैँमा पाएजस्तै लाग्यो हामीलाई । फुरुङ्ग पर्याैं सबै । सबैले आआफ्ना ब्यागेजहरू कोठामा लगेर राख्यौं र फ्रेस भई चिया पिएर रोहताङ जानको लागि तयार भयौं ।
मनाली जानको लागि अन्तिम ट्रेन स्टेसन चण्डीगढ रहेछ । दिल्लीबाट ९ सयदेखि १ हजार ९ सय ५० भारु सम्मको रेटमा विभिन्न समयमा छुट्ने बस पाइने रहेछ । दिल्लीबाट करीब १२ देखि १४ घण्टाको यात्रापछि मनालीको माटो टेक्न पाइने रहेछ । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको कुल्लु जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर पर्वतीय नगर हो मनाली । मानवको उत्पत्तिकालदेखि महाभारत युद्धसँग जोडिने विभिन्न पौराणिक सम्पदाहरूले समृद्ध मनालीमा व्यास नदी, हिडिम्बा टेम्पल ( भीमसेनकी पत्नी हिडिम्बादेवीको मन्दिर) वशिष्ठ टेम्पल, मनु टेम्पल, मणिकर्णिका, सोलाङ भ्याल्ली, रोहताङ घाटी, प्राचीन बौद्ध गुम्बाजस्ता वैभवहरूले सुसज्जित रहेछ मनाली ।
समुद्र सतहदेखि १ हजार ९ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको मनाली दिल्लीबाट ५ सय ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । मनालीबाट रोहताङ ५५ किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ । रोहताङ मनालीको प्रमुख पर्यटकप्य स्थान हो । मनालीका हिमशृङ्खलाहरूले जोसुकै प्रकृतिप्रेमीहरूको मन हरण गर्छ । लाग्छ रोहताङ सुन्दर पर्वतमालाहरूले बारेको चाँदीकै बगैँचामा उभिई चाँदीको च्यादर बिछ्याएर पाहुना र पर्यटकहरूलाई आह्वान गरिरहेछ । जनवरीदेखि मार्चसम्म हिँउको वर्षा हुने र अति जाडो हुने रोहताङ एउटा सुन्दर हिमाली घाटी रहेछ ।
हुन त हाम्रो देशको उत्तर दिशामा पर्ने थुप्रै पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू मनालीभन्दा कम सुन्दर मनमोहक छैनन् । मनालीमा जस्तो गरेर हाम्रो देशका यस्ता सुन्दर ठाउँहरूमा सरकारको नजर पुग्नु हो र यातायातको सुविधा हुनु अनि पर्यटन विकासमा पहल गर्नु हो भने मनालीलाई उछिन्ने प्राकृतिक सौन्दर्यको खानी छ नेपालमा । खप्तड क्षेत्र, रारा, कर्णाली, खुम्बु क्षेत्र, मकालु हिमाल, वरुण भ्याल्ली र किमाथाङ्का मनालीजस्तो विकसित हुनु हो भने लाखौँ विदेशी र स्वदेशी मुद्रा र पर्यटकहरूको मन खिच्न सफल हुनेथियो यी पहाडी र हिमाली नजाराहरू ।
सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प लगायतका स्थानहरूमा ट्रेकिङ र हिमाल आरोहरणबाहेक अन्य पर्यटकीय गन्तव्यका प्रचुर सम्भावनाहरू छन् । जसबाट विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकियोस् । जस्तै, धार्मिकस्थल वरुण स्नान, वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण, रारा ताल, सोफोक्सुण्डो तालको भ्रमण, निकुञ्ज भ्रमण, हिमाल दृ्श्यावलोकन, प्याराग्लाइडिङ, जीपलाइन, रोपवे, संस्कृति दर्शन, घोडसवारी, ¥याफ्टिङ आदि ।
यस्तै, मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा पनि पर्यटनको प्रचुर सम्भवना भएका धेरै स्थानहरू छन् । यसका लागि विभिन्न समयमा महत्वपूर्ण योजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयहरू नभएका पनि होइनन् । हाम्रो देश ती पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि समयसमयमा बनिएका नीति, नियम र योजनाहरू कार्यान्वयन नहुनु नै मुलुकको लागि दुर्भाग्य साबित भएको छ । त्यसमा पर्यटनको लागि त सरकारले यातायातको सुविधा मात्र पु्र्याइदिएर त्यहाँका विशेषताहरूलाई महत्व दिँदै प्रचारप्रसारमा जोड दिई अन्तर्राष्ट्रिय प्रबद्र्धनका साथ स्थानीय र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराइदिन सके त्यहाँका स्थानीयले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न टाढा जानु पर्दैनथियो । भोक मेटाउन हजारौँ युवाहरूले खाडी मुलुकको ४८ डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउनु पर्दैन थियो र अवसर खोज्न लाखौं नागरिकहरूले परदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन ।
मनाली पर्यटनले धानेको भूमि हो रहेछ । यहाँका जमिनहरूमा टाढाटाढासम्म हेर्दा पनि कुनै अन्नबाली वा फसल लगाएको देखिन्नँ । शायद आशीर्वाद नै पाएकै हो त्यो ठाउँले जहाँ एक गेडा अन्न उब्जनी नगरे पनि लाखौँ जनता भोका छैनन् । पर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीले नै अघाएका छन् र सम्पन्न पनि भएका छन् । पहाडका डाँडाकाँडा यसै सुन्दर, त्यसमाथि हरिया धुपीको बोट, ठाउँठाउँमा पहाडी खोला, झर्नाहरूले झन् मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो । बाटोभरी सेता ट्याक्सीहरूको लर्काे थियो । मनालीबाट करीब पाँच किलोमिटर उत्तर पुगेपछि सानो बजारमा पुगेर गाडी रोकियो ।
त्यहाँबाट भने हामीले त्यहीँका ट्याक्सीहरूमार्फत् रोहताङ् जानुपर्ने रहेछ । साथै माथि पुगेर कुनकुन खेलबाट मजा लिने हो त्यसको शुल्क पहिल्यै तिर्नुपर्ने रहेछ । हिँउमा लगाउने पहिरन पनि छनोट गरी लगाउन लगाए । सबै जना हिमाल आरोहीजस्तै भुक्कभुक्क भयौँ । पहिले ३ जना सजिलै अटाएको सिटमा अब भने अटसमटस भयो र ३ जनाको सिटमा २ जना मात्र सजिलोसँग अटाइयो । केही मास्तिर पुगेपछि खोलामा जीपलाइनको मज्जा लिइयो । मलाई भने हाम्रो देशमा बग्ने अनेकौ सुन्दर खोला नालाहरूमा पनि यस्तो रोमाञ्चक खेल तथा मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्न पाए कति आनन्द लिन्थे होला पर्यटले र आम्दानी हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्यो ।
हामी जतिजति मास्तिर लाग्थ्यौँ उतिउति पर्यटकको घुइँचो भेटिन्थ्यो । मलाई भने जतिजति पर्यटकको घुइँचो भेटिनथ्यो त्यति नै आफ्नो देशमा त्यसै खेर गइरहेको प्राकृतिक सुन्दरता र सम्पदाहरूले मनै छुकछुक बनाउँथ्यो । पहाडको घुमाउरो सडक पार गर्दै जतिजति माथि गइयो उतिउति मनमोहक हिमाली दृश्यहरूले हाम्रो नजर तान्थ्यो । निकै माथि पुगेपछि सानो टार जस्तोमा कटेज टाइपका होटल पसलहरू भेटिए । त्यहाँ पनि पर्यटकहरूको उस्तै घुइँचो थियो । सबैले बिहानको ‘हेभी नास्ता’ त्यहीँ गरेर उकालो लाग्यौँ । अनेकौँ मोड र घुम्तीहरू पार गरी ५५ किलोमिटरको यात्रा तय गरिसकेपछि रोहताङ पुगियो ।
ओहो ! अर्कै लोकमा पुगेजस्तै भयो मन । एक छिनसम्म त हेरेको हेरेकै भएँछु सुन्दर हिमशृङ्खलाहरू । परपरसम्म फैलिएको सडकभर लहरै राखेका करीब २ सय सेता ट्याक्सीहरू छिचोल्दै हाम्रो ट्याक्सी अघी बढ्यो र चाँदीको च्यादर बिछ्याएको जस्तो फराकिलो हिमफाँट र अद्भुत हिमनदीहरूले हामीलाई आफ्नो काखमा बोलाएझैँ लाग्यो । खुशीले चिच्याइदिऊँ कि जस्तो लाग्यो । ट्याक्सीबाट ओर्लिनासाथ हिँउमा लडीबुडी खेल्ने हतार भयो । हिमाली चिसो बतासले टाउको र हात चिसो हुँदा पो होश आयो टोपी र पञ्जा छुटेछ ।
त्यहीँ डुलाएर सामान बेच्नेसँगै एक÷एक जोर पञ्जा र टोपी किनेर लगाएपछि केही छिन हिँउको बिछ्यौनामा उत्तानो पल्टिएर आकाश हेर्दैरहेँ । अघिल्लो दिन बेलुका हरियाणाको शिव ढावामा खाएको चिसो दही र आँपको अचारले घाँटी मात्र होइन छाती अँठ्याइसकेको थियो । त्यसैले होला घरीघरी सास नै छोटोछोटो हुन्थ्यो । त्यसमाथि हिमाली हावाको चिसोको त कुरै नगरौँ । तर पनि त्यसको कत्ति पर्वाह नगरी हिँउसँग खेलेर जीवनकै पहिलो पृथक मनोरञ्जन बटुलियो । निकैबेर हिँउमा खेलेपछि हामी फेरि ओरालो लाग्यौं ।
भोलिपल्ट बिहान मनालीको प्राचीन र धार्मिक महत्व बोकेको हिडिम्बा टेम्पल हुँदै ओरालो लागियो । कमसेकम ५ दिनको बसाईमा मात्र पूरा गर्न सकिने मनालीका मुख्य र महत्वपूर्ण भ्रमणहरू हामीसँग समय अभावले अधकल्चो छोडेर दुई दिनपछि सिमलातिर लाग्यौं ।
यो त थियो भारत भ्रमणको अनुभव । नेपाल भ्रमणको सुन्दर सम्झना र अनुभूति लेख्ने उत्प्रेरणा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० ले लाखौँ लाख मनहरूलाई प्रदान गरोस् र मलाई पनि ।
सिमला डायरी पछि प्रस्तुत गर्ने शर्तमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० प्रति आशावादी हुँदै सम्पूर्ण नेपालीले यसलाई आआफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट सफल पार्ने प्रयास जारी राखौं र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सफल पार्न स्वयम् र सरकारलाई घच्घच्याऊँ अनि नेपालमा पनि अपूर्व समृघि भित्र्याऔँ । टुर न्यूज मासिकबाट